PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-13 - Kugqugquzelwa ukufunda kubefundisi
Kugqugquzelwa ukufunda kubefundisi
Ilanga langeSonto - 2019-01-13 - Izindaba - EZENKOLO TSEPO MOLEFE
ISEKELA likamengameli webandla izulu Congregational Church (ZCC), elibuye libe ngusomabhizinisi ohlonishwayo emgungundlovu, litusa igalelo lomndeni walo, ngokuleseka emsebenzini wenkosi njengoba lingomunye wabaholi abaphambili ababheke leli bandla elisabalele iningizimu Afrika.
Umfu Dumisani Petros Mkhize, wasenadi, ngasetaylors Halts, obuye abe ngusomabhiziniso ohlonishwayo kule ndawo, ubenengxoxo NELANGA Langesonto lapho ebechaza khona ngomsebenzi wakhe EZCC njengoba elekelela umengameli waleli bandla, umfu Mabandla Petros Masina, oyinhloko yamazcc eningizimu Afrika.
Umfu Mkhize usanda kuhlonishwa ngeziqu zobudokotela emkhakheni wezenkolo yilight of the World Bible College, ngaphansi kukarector u-archbishop Sol Roger Sibiya wasemgungundlovu.
Umfu Mkhize uthi naphezu kokuba uyakhuluma, ubonga inkosikazi yakhe, unkk Ntombikayise Mkhize, ehlale ingasesandleni sakhe sokuphosa kukhona konke akwenzayo.
Omunye ambalule ngokumeseka nokumcathulisa, ngumnu Themba Njilo, oyimeya kumasipala waseMsunduzi naye futhi ongusomabhizinisi ohlonishwayo emgungundlovu futhi abangomakhelwane njengoba bonke bengabasenadi.
“Ukungena elight of the World Bible College, kungivule kakhulu amehlo ngoba ngifunde kabanzi ngezifundo zebhayibheli nokuphathwa kwebandla. Ngibonga nebandla ngokungiqonda ukuthi ngesikhathi esithile angikwazi ukuhlanganyela nalo njengoba bengiwumfundi.
"Ngilibonga ngoba likwazile ukungihlonipha njengoba besiye sihlehlise izinsuku sibheke ukuthi yiluphi oluvumelana nami bese siyayiqhuba leyo nkonzo.
"Kuthe nangesikhathi sengiqedile ukufunda sengizothulwa ngabaphathi bekolishi kulona ibandla, laphinda futhi laba nami abazalwane baqhubeka nokungeseka.
"Njengoba ngiyisekela likamengameli Masina ngibheke ingxenye enkulu lapha Kwazulu-natal, ngakho angitholakali endaweni eyodwa,” kubeka yena.
Eveza akutholile umfu Mkhize ngesikhathi efunda ezenkolo, uthe uvuleke amehlo kakhulu kunakuqala futhi usenokuzethemba okuphelele uma emi phambi kwabazalwane ngoba kuningi akufundile ekolishi lezenkolo.
Unxuse nabanye abefundisi ukuba bakukhuthalele ukufunda yikhona bezohola amabandla ngendlela efanele enesithunzi.
Usol Archbishop Sibiya walapho kufunde khona umfu Mkhize, ucele abefundisi abasebancane ukuthi bakukhuthalele ukufunda, kodwa bangathi uma sebebuyela emabandleni bafike bamise umhlwenga, baphoqe ukugudluzwa kwabefundisi abadala.
Uthi abefundisi abawuhlupho emabandleni ngeke basithole isibusiso ngoba bakhalisa abantu abadala.
Ubongele umfu Mkhize ngokuzijuba ayofunda naphezu kokuba engumuntu omatasatasa njengoba kumele abheke namabhizinisi akhe. Ucele abefundisi abasebancane ukuba mabapheze ukubiza abefundisi abadala ngamahlathi ngoba nakhu bona sebeye bathola ithuba lokufunda.
UMFU Petros Mkhize oyiphini likamengameli wasezcc, nenkosikazi yakhe, untombikayise Mkhize ambongayo ngokumeseka.